KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (36115)
'01 1500 FI Drifter, အဘယ်သူမျှမမီးပွား - Kawasaki ဖိုရမ် (11221)
Bajaj Avenger 220: တစ်ဦးကဘက်စုံပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ကယ် Blo ... (9932)
MZ စမှတ်စုများ - Philadelphia တွင်မွငျးစီးစဝီကီ (9633)
ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ relay ကိုအမျိုးအစားများအပေါ်မှတ်စုများ (သတိပေးခြင်း: မှိုင်းခြင်းနှင့်ငြီးငွေ့စရာ ... (9025)
VP ပြိုင်ပွဲလောင်စာနောက်ဆုံးရသတင်းများ: VP UNLEADE မိတ်ဆက် ... (8677)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (8270)
Peugeot မြန်နှုန်း Fight2အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန် ... (7348)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (5864)
နေအိမ် → KTM → KTM Rally blog
1 Apr 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့
It all starts withasolid basis for the project: ဆိုင်ကယ်. I choose the KTM 690 Enduro R for its combination of power and durability whilst being relatively lightweight. I”ve looked at the KTM 530EXC for it’s lightness, but this bike would needalarger fuel tank which -in combination with other parts it missed in standard configuration- would add so much weight the difference with the 690 was reduced to only 13 ကီလိုဂရမ်.
By usingarelay it was possible to get it operated properly. Last but not least the sidestand safety switch was disconnection by fittingaKTM powerparts device and connect it to the switch wire. သတိပေးခြင်း: never disconnect or bridge the clutch switch, the bike will think it runs idle and runs onadifferent mapping.
2009 KTM 450 နှင့် 505 SX, Two Stellar “Ready To Race” ATVs
KTM 125 Duke (2011-current) မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း MCN သို့
Ducati 60 ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down Brammo Enertia Ducati Desmosedici GP11 ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype ဆူဇူကီး AN 650 တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို ဟွန်ဒါ DN-01 Bajaj Discover Aprilia Mana 850 ဆူဇူကီး Colleda CO စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး စမတ် eScooter ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် စက်ဘီး Kawasaki ER-6n Ducati Diavel Moto Guzzi 1000 Daytona Injection သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic